के एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र सम्भव छ ? « Sansar News
१ कार्तिक २०७४, बुधबार ०५:५२
१ कात्तिक, काठमाडौँ । सन् १८९८ मा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । स्थापनाको ५ वर्षकै अन्तरालमा कम्युनिष्ट पार्टी बिभाजनको शिकार बन्यो । लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिक र प्लेखानोभको नेतृत्वमा मेन्सेभिक पार्टीका रुपमा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीमा विधिवत् विभाजनपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको प्रारम्भ भयो । लेनिन संगठित र अनुशासित कम्युनिष्ट पार्टी चाहन्थे । तर, प्लेखानोभ खुकुलो संगठनात्मक प्रणाली चाहन्थे । अन्ततः लेनिनको पक्षमा बहुमत र प्लेखानोभको पक्षमा अल्पमत देखा पर्यो । रुसी भाषामा बहुमतलाई बोल्सेभिक र अल्पमतलाई मेन्सेभिकका रुपमा परिभाषित गरियो । त्यसयता भावात्मक रुपमा बोल्सेभिक क्रान्तिकारी र मेन्सेभिक सुधारवादी शक्तिका रुपमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परिचित छन् ।
‘सबै बाम एक ठाम’ देखि ‘नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्रको आवश्यकता’ छ भन्नेसम्मका मतहरुले बेलाबखत गुरुत्वपूर्ण बहसको सिर्जना समेत गर्दथे । राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पहल पनि हुँदै आएको थियो । अहिले त्यही जनमतको व्यवहारिक सम्बोधन भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको शब्दमा भन्दा ‘जनताले नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी, बामपन्थी, देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरुको एकता चाहन्थे, जनताको त्यही भावनाको सम्बोधनका लागि पनि एकता अपरिहार्य थियो ।
जब तयारीको चरण पुरा गरेर समाजवादमा संक्रमणको सवाल आउँछ, त्यो बेला बुर्जुवा वर्ग सहजै सत्ता हस्तान्तरणमा सहमत हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, अझ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै बुर्जुवा वर्गका प्रतिनिधिहरु पनि त्यसको विपक्षमा उभिनेछन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग संघर्षका अनुभवहरुले पनि त्यसलाई गलत सावित गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचनपछि पार्टी एकताकै निम्ति तयार भएका एमाले र माओवादीका नेताहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजवादको तयारी गर्ने साझा निष्कर्षमा पुगेका छन् । समाजमा वर्गहरुको अस्तित्व कायम रहने र भिन्न रुपमा वर्गसंघर्ष झनै पेचिलो बन्दै जाने विज्ञानको अनिवार्य नियमको परिदृश्यमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकै आधारमा समाजवादमा पुग्न सजिलो छैन । समाजवादको आधार तयार पार्ने काम वैधानिक मोर्चाबाट पनि अगाडि जान सक्दछ । तर, जब तयारीको चरण पुरा गरेर समाजवादमा संक्रमणको सवाल आउँछ, त्यो बेला बुर्जुवा वर्ग सहजै सत्ता हस्तान्तरणमा सहमत हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, अझ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै बुर्जुवा वर्गका प्रतिनिधिहरु पनि त्यसको विपक्षमा उभिनेछन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग संघर्षका अनुभवहरुले पनि त्यसलाई गलत सावित गर्दै आएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा मात्रै शान्तिपूर्ण संक्रमणकै बलमा समाजवादमा पुग्न सकिएला ? निकै विचारणीय सवाल छ ।
बाम समीकरण र एकताको घोषणाबाटै झस्किएको प्रतिक्रियावादी वर्ग चुपचाप बस्ने छैन, न त एकताको पक्षमा रहेकै पूँजीवादी कित्ताले समाजवादलाई सहर्ष स्वीकार्ने छ । त्यस्तो परिस्थितिमा समाजवादमा संक्रमणमा बलप्रयोग कि शान्तिपूर्ण बाटो ? भन्ने सवाल अहिले नै टुङ्गाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण ठहरिदैन ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति बीचको एकता प्रयास स्वागतयोग्य प्रयास नै हो । यद्यपि, एकताका लागि गरिएका दर्जनौं प्रयासहरुको असफलताबाट हामीले शिक्षा लिएर मात्रै एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौं । एकताका निम्ति साझा वैचारिक मार्गचित्र, एक–अर्काको सम्मान, सहअस्तित्व, इतिहासको पूनर्मूल्याङ्कन अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । तसर्थ, समाजवादी समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्यमा पुग्न नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्रभन्दा बलियो बिकल्प अरु हुन सक्दैन ।